KU DHAJINTA ABUURKA BEGONIAS LEH CALEEN: TILMAAMO TALLAABO TALLAABO AH OO LOOGU TALAGALAY TARANTA UBAX GURIGA, SIDA LOO KORO JIRIDA BIYAHA IYO SIYAABO KALE, IYO WELIBA SAWIRO - GURI, GURI
Cunto fudud oo la awoodi karo ama taranta caleemaha begonias. Talooyinka, sifooyinka iyo tilmaamaha
Begonia waxay soo jiidataa dareenka dhammaan ubaxlayaasha ma aha oo kaliya quruxda ubaxa, laakiin sidoo kale midabka dhalaalaya oo qurux badan oo caleemo ah. Midabkani wuxuu u gudbiyaa faraca marka la isticmaalayo hababka faafinta daaqsinka, oo ay ku jiraan sheyga caleenta.
Haddii aad ogtahay sida dacaayad ubax leh caleen, waxaad ka heli kartaa geedka cusub, dhirbaaxo leh waqti gaaban. Ma aha wax adag in la sameeyo tan, iyo wax ku oolnimada caleen isku dhufashada ubax waa mid aad u sarreeya.
Aynu ka wada hadalno habkan si faahfaahsan ee maqaalkeena. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Sidee loogu dhufan karaa guriga?
Waxaa jira 5 habab oo waaweyn oo dhalmo ah ubax:
Diidmada qaybaha xaashida.
Sida loo abuuro ubax qayb ka mid ah geedka?
Cunto-abuurka begonias leh caleen waa qaab fudud oo wax ku ool ah ee ubax cusub.. Waqtiga lagu taliyey - guga - xagaaga.
Habkani wuxuu leeyahay dhowr dhibcood oo wanaagsan:
wuxuu fursad u helayaa inuu helo hal mar dhowr begonias;
dhirta hooyadu waxay keenaysaa waxyeello yar;
Warshad cusub oo dhalinyaro ah oo isticmaalaysa habkan ayaa awood u yeelan doonta in ay guriga ku koraan mudo ah 1 - 3 bilood.
Digniin: Habka taranku wuxuu ku habboon yahay noocyada nooca begonias ee lagu garto jiritaanka qeybta hoose ee pubescent ee caleen oo ay leeyihiin stem.
Xayawaanka. Xayawaanka waa in aan lagu darin cudurada faafa cudurada iyo cayayaanka. Si loo yareeyo khatarta dhacdooyinka noocan ah, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo biyaha uumiga iyo daaweynta ciidda muddo nus saac ah.
Waraaqda. Mid ka mid ah caleen caafimaad leh oo weyn ayaa la doortaa oo la gooyaa salka iyada oo aan wax khasaare ah iyo cudurro fangas ah. Si looga hortago muuqaalkooda, waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo fungicide ka hor beerashada. Caleemaha noocan oo kale ah macnaheedu ma aha inay asaas u yihiin gebi ahaan, sidaas darteed waa in la gooyaa qaybo gooni ah, mid kasta oo ka mid ah waxa ku jira xididka. Caleenta caleenta ah, carruurta badan ayaa ka heli kara. Haddii xaashidu tahay mid dhexdhexaad ah, waa la wadaagi karaa oo dhan.
Caleen caleen ah ujeedada ah dhalashada waxaa lagu sameyn karaa habab kala duwan:
Geedka caleemo qulqulaya biyo. Ka dib markii xididdadu muuqdaan, caleen waxaa lagu beeray dheri leh substrate ah.
Burburinta ciidda xaashida oo dhan. Caleen waa razlazhivaetsya on dhulka wajiga iyo cadaadiyey ciidda leh load ah qaab ah ee dhagaxyada.
Burburinta caleemaha caleen. Qayb kasta oo ka mid ah ayaa lagu dhajiyay qaybta carrada.
Doorashada dheriga "saxda ah"
Wixii rooting jajab ah begonias xaashida uma baahna wax gaar ah. Badiyaa badanaaba beeralayda waxay isticmaalaan koobabka caag ah 100-garaam oo leh godadka dheecaanka ee hoose. Waxa kale oo aad qaadan kartaa weel balaastig ah. Waxay ka fiican tahay haddii darbiyada weelka ay yihiin kuwo hufan: way sahlan tahay in la ilaaliyo soo ifbaxa iyo horumarinta xididka geedka dhalinyarada.
Waa muhiim: Shuruudaha ugu muhiimsan ee dhulka loogu talagalay begonia waa in ay noqoto dabacsanaan iyo neefsan, oo leh content humus hooseeya.
1 doorasho: Isticmaalidda jajabyada caleenta, waxaad isticmaali kartaa kiriimyada peat iyo kiniinnada qumbaha: ka dib markaad kiniiniga ku qulqulayso biyo diirran, ku dar miisaanka 1: 1, ku dar 10% ilaa 20% perlite mugga substrate.
2 doorasho: 1 qiyaasta peat isku qasan 1 ceel oo webi ah.
3 doorasho: Isku qasin ciid leh sphagnum la jajabiyey 1: 1.
Tilmaamaha talaabada tallaabo ee ku saabsan sida laysugu dhufto siyaabo kala duwan.
Waxaa jira 3 siyaabood oo ah caleen taranta:
Diyaari wax kasta oo aad u baahan tahay: mindi fiiqan, warqad of begonias, saxan ama dhalo, substrate, dheecaan, dheriyo, boorso caag ah, koono firfircoon, "Kornevin".
Ka saar jirida caleenta.
Warqad ku rid farshaxan leh mindi jilicsan oo ka soo jeeda dhexda dhexe ilaa geeska ee qaabka saddexagalka, mid kasta oo ka mid ah waa inuu leeyahay hal ama laba xidid, maaddaama dhammaan nafaqooyinka ay u socdaan. Laga soo bilaabo hal warqad ayaa laga heli karaa 10 ama kabadan.
Ka daawee maraqyada dhuxusha dhaqdhaqaaqa oo lagu qasi karo "Kornovin".
Weelka hoose ku buuxi lakabka dheecaanka, ka dibna ku shub substrate qoyan 2/3 ee dheriga.
Markaad sameysey dhul yar oo yaryar ah, dhulka hoostiisa ku sii qulqulaya adigoo jaraya 5 - 7 mm.
Si tartiib ah u burburin karo substrate gacmahaaga, sidaas oo kale hagaajinta qaybta xaashida.
Weelka ku dabool bac caag ah oo kor ku dheji ama ku dheji dheriga caag balaastik ah oo khaas ah oo u shaqeeya sidii koronto.
Waxaan kugula talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan dhalashada ee begonias leh cillado caleen ah:
Waxaad ku dhufan kartaa curonia adiga oo jaraya xaashida. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay:
Qaado warqad balaaran oo begonias, mindi, dheri, substrate, dheecaan, dhagaxyo, baco caag ah.
Qeybta hoose ee dheriga waxaa ka buuxsami kara dheecaan, ka dibna leh substrate qoyan.
Caleenta ballaaran oo caafimaad leh (dhererka 7cm ama ka badan) ayaa lagu jajabiyay mindi fiiqan oo ka soo baxa xididada meelo kala duwan (masaafada u dhexeysa jeexinta waa inay noqotaa 2 ilaa 3 cm).
Caleenta la qaloociyey waxaa la dhigayaa wajiga hoosta ciidda qoyan ee dheriga.
Xaashida waxaa lagu riixay dhagaxyo yaryar ilaa substrate meelo u dhow meelaha la jarayo.
Daboolka dusha sare ee caaga.
Waxaan kugula talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan tarantaada ee begonias isticmaalaya xaashida jarista:
Qaabkan, warqad dhamaystiran ee begonia ayaa la qaadaa.. Waxay ka kooban tahay kuwan soo socda:
Diyaarso caleen caafimaad leh oo caafimaad leh, weel biyo ah, kiniin ah oo kaarbiyaysan.
Weel ku jirta biyo, ku dar kiniin kaarboon oo firfircoon.
Ku dhaji caleen caafimaad leh oo caafimaad leh oo ku jira weel biyo ah oo iska tag ilaa xididada ay soo baxaan.
Caleenta muuqaalka leh ee xididdada muuqda waxay ku dhexyihiin dheriga dhulka, daboolay bac caag ah.
Nidaamkan soo saarida, sida adoo ku dhejinaya caleen leh biyo qabasho, waxay suurtogal u tahay in uu helo hal warshad kaliya.. Intaa waxaa dheer, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah ugu yaraan waxtar leh, sida xididada waa daciif ah oo ay adag tahay in lagu noolaado ciidda ka dib transplanting.
Waxaan kugula talineynaa in aad daawato fiidiyowga ku saabsan foosha ee begonias leh caleen ku jirta biyaha:
Greenhouse waxaa badanaa la dhigaa meel diiran (+ 20C - + 24C) iyo meel quruxsan, laakiin meel aan lahayn qorraxda tooska ah. Haddii taranta laga sameeyo jiilaalka, geedo waa in la siiyaa iftiin dheeraad ah. Wixii dhirta dhalinyarada ah, dhibcaha heerkulka iyo mashruucyada lama ogola.. Kama saari kartid aqalka dhirta lagu koriyo ilaa caleemaha cusub la sameeyo!
Iyadoo ay soo ifbaxday caleemaha ugu horreeya, geedka waa in uu bilaabo inuu caado u yeesho hawada qolka. Si tan loo sameeyo, ugu horeyn 3-5 daqiiqo, ka dibna 10 daqiiqo maalin kasta si aad uga saarto bac ama fur furka aqalka dhirta lagu koriyo.
Waqti ka dib, muddada ay "airing" u baahan tahay inay korodho. Ka dib marka qaybaha caleenta siinayaan xididada, waxaa laga saari karaa laga bilaabo koriyo oo u guuray meel joogto ah.
Biyaha si haboon
Si aad u guulaysiga guul leh ee lagu koriyo waa in ay ahaato qoyaan joogto ah oo joogto ah, taas oo hawada iyo dusha sare ee ciidda waa in si joogto ah loo buufin, laakiin iyada oo aan abuurin qoyan, sida xaashi begonia si fudud u kala jajabi kartaa. Baahida loo qabo buufinta kale waxay muujin kartaa maqnaanshaha gogol dunta iyo daboolka aqalka dhirta lagu koriyo.
Guddi: Maaraynta substrate waa beddelka waraabinta inta uu dhirta yaryar ku jiro aqalka dhirta lagu koriyo. Kama bixi kartid caleemaha warshad leh dhalo buufin, maadama ay dhirtu u muuqan karto iyaga, kadibna dhirta way dhiman kartaa.
Sida loo dhalo caleemaha yar yar?
Cadaadiska biyaha xooggan ayaa ka dhigi kara nidaamka xididada liita ee daciifka ah, sidaas darteed waraabinta ka dib marka laga saaro aqalka dhirta lagu koriyo waa in si taxaddar leh loo isticmaalo habka waraabinta waraabka ama waraabinta lakabka sare ee substrate laga soo qaato qoriga buufinta.
Waxaad isticmaali kartaa oo macneheedu yahay, tusaale ahaan, inaad ku waraabiso qaaddo ama siriinje.
Sidoo kale horumarinta nidaamka asaasiga ah ee warshad dhalinyaro ah waxaa lagula talinayaa inay soo saaraan waraabinta digsiga.
Waraabka si joogto ah - sida qalajinta lakabka sare ee carrada.
Biyaha waa inay ahaadaan heerkulka qolka ama shahaadada - laba ka sareeya.
Habka caleemaha dhirta loo yaqaan waa mid sahlan oo wax ku ool ah. Uma baahna kharashaadka khaaska ah. Intaa waxaa dheer, in waqti aad u gaaban waxaa suurtagal ah in la koro tiro badan oo dhirta cusub ee caafimaad leh caleen.